कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको सडक हस्तान्तरण
नेपाली सेनाले निर्माणाधिन कालीगण्डकी करिडोर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमार्फत सेनाले करिडोरअन्र्तगत गुल्मीको रुद्रवेनीदेखि अर्वेनीसम्म (२० कि.मि.) र बाग्लुङ्गको मालढुङ्गादेखि बलेवा एयरपोर्टसम्म (१० कि.मि.) सहित ३० किलोमिटर सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पालाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली सेनाले विकास निर्माण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा कठिन कार्यहरु गरेको बताए । उनले महत्वपूर्ण घडीमा समेत सेनाले राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । कालीगण्डकी करिडोरलाई मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँग जोड्ने सामरिक महत्वका योजनाका रुपमा रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले मुलूकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारी नेपाली सेनाको रहेको बताए । उनले संविधानको परिधिमा रहेर नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्र निर्माणलगायतका कामहरु गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्मा, नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, अन्य सुरक्षा निकायका स्थानीय प्रमुखहरु सहभागी थिए ।
२०७० वैशाख २० गते उक्त करिडोर अन्तर्गतको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । सेनाले रिडिदेखि रुद्रवेनीसम्मको ७ कि.मि. सडक खण्ड गत वर्ष फागुनमै सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।